Ity mpanakanto ity dia mamorona fehezam-boninkazo tsara tarehy sy goavambe misy taratasy | Famoronana an-tserasera
Na dia any amin'ny magazay lehibe any amin'ny firenena maromaro aza dia manjavona tsy ho eny amin'ny talantalana ny taratasy fidiovana, manana izany isika mpanakanto mahay mamorona fehezam-boninkazo goavambe sy tsara tarehy vita miaraka amin'ny sela.
Una tolo-kevitra famoronana feno loko ary izany dia mampiseho fa ny hevitra tsotra dia mety hiteraka asa kanto hodinihina. Marianne Eriksen-Scott Hansen no mpanakanto afaka nanao ireo fehezam-boninkazo taratasy ireo.
Voninkazo taratasy dia anisan'ny namorona isan'andro ity mpanakanto ity 5 taona lasa. Na dia toa tsy misy dikany aza ny fampiasana taratasy be dia be milatsaka, ny sary dia an'io andro io nandritra ny taona maro.
Mpanakanto efa miasa amin'ny orinasa lehibe toa an'i Karl Lagerfeld na Viktor & Rolf na koa ho an'ny tranombakoka samihafa any Danemark. Ny asany dia tsy mamela olona tsy hiraharaha na iza na iza ary manome mazava tsara ny kanto ananany amin'ireo fehezam-boninkazo taratasy ireo.
Ary raha efa manana finesse amin'ny antsipiriany ianao, dia fehezam-boninkazo Marianne lehibe habe ary miavaka amin'ny lokony lehibe izy ireo. Araka ny hita amin'ny sary nandray anjara tamin'ity famoahana ity dia tsy miresaka fehezam-boninkazo antonony izahay fa afaka mitazona toerana malalaka.
Tokony ho hitanao ny maha-izy azy mahay mamolavola ny lilia amin'ny sakafo matsiro toy izany fa toa saika teo izy ireo toy ny nitombo talohanay. Toy ny fanaontsika matetika amin'ireto tranga ireto dia mizara ny kaontin'i Instagram an'ity mpanakanto ity hianatra momba ny sangan'asany vaovao sy ny fitiavany ireo fehezam-boninkazo kanto azony amin'ny tanany.
Izahay mamela anao amin'izany Mpanakanto Japoney izay manintona voninkazo vitsivitsy amin'ny loko rano amin'ny antsipiriany mahafinaritra ary mampianatra ny fomba hisarihana azy ireo. Raha te haka fotoana sy hianatra ianao dia aza adino ny fotoana nifanarahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ity mpanakanto ity dia mamorona fehezam-boninkazo goavambe vita amin'ny taratasy tavy
Ny Affinity dia mametraka ny rindrambaiko famolavolana drafitra iray manontolo maimaim-poana mandritra ny 90 andro